Kylian Mbappe Oo Laga Baadhay Xanuunka Aduunka Ka Qaylisiiyey Ee Carona Virus? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa laga baadhay cudurka halista badan aduunka ku yeeshay ee Carona Virus ka dib markii uu xanuun la maqnaa maalmihii la soo dhaafay.
Kylian Mbappe ayaa shalay iyo maanta seegay tababarkii kooxdiisa PSG kadib xanuun soo foodsaaray waxayna taasi keentay in uu shaki hadheeyay xaaladiisa taas oo sabab u noqotay in laga baadhay Corona virus.
Warbaahinta dalka Faransiiska ayaa shalay soo bandhigtay in Kylian Mbappe uu xanuun ku maqnaa waxaana sidoo kale maanta la xaqiijiyay in uu markale la sii dhibtoonayay xanuunkii uu shalay la maqnaa.
Laakiin markii uu shakigu sii xoogaystay waxaa kooxda PSG waajib ku noqotay in ay Kylian Mbappe ka baadhaan cudurka Corona Virus laakiin sida hadda la cadeeyay natiijada baadhitaanka ayaa la soo saari doonaa barri oo ay PSG la ciyaari doonto kooxda Borussia Dortmund.
“Kylian Mbappe waxaa laga baadhay corona Virus, natiijadu waa barri, laakiin calaamadaha hordhaca ahi waxay muujiyeen in aanu qabin viruska” ayaa lagu yidhi qoraal lagu baahiyay Get French Football News oo laga leeyahay dalka France.
Dhinaca kale RTL ayaa shaaciyay in Mbappe uu la dhibtoonayo caabuq dhinaca cuna ama dheef mareenka ah waana sababta looga shakiyay in uu qabo cudurka Corona Virus ee baadhitaanka natiijadiisa rasmiga ah la sugayo loogu sameeyay.
Warbaahinta RTL ayaa lagu sheegay: “Kylian Mbappe waxa uu qabaa caabuq cuno xanuun oo halis ah, inta ugu badan maanta waxa uu ku qaatay sariirta waxaana loo sameeyay daawayn si xanuunka looga fududeeyo. Ma kala cada haddii uu barri tababaran karo”.
Natiijada baadhitaanka Corona virus ee loo sameeyay Kylian Mbappe ayaa barri la ogaan doonaan waxayna PSG wadnaha farta ugu haysaa xaalada mid ka mid ah xidigaha kooxdeeda ugu muhiimsan ee ay ku xisaabtamayeen kulanka Dortmund.
Haddii uu Kylian Mbappe ka soo kabsan kari waayo xanuunka uu labadii maalmood ee ugu danbaysay sariirta u yaalay, waxay PSG la kulmi doontaa dhabar jab wayn kulanka Borussia Dortmund oo ay waliba garoon madhan kula ciyaari doonaan.